नेपालमा रहेको ५ करोड भारु साट्ने व्यवस्था मिलाइदिन अर्थमन्त्रीको आग्रह. Break n Links: Media for all - Across the globe
नेपालमा रहेको ५ करोड भारु साट्ने व्यवस्था मिलाइदिन अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले नेपालमा रहेको ५ करोड भारतीय नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन भारतीय वित्तमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
भारतमा भइरहेको विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका खतिवडाले वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणसँगको भेटमा उक्त आग्रह गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले भारत सरकारले भारु ५ सय र १ हजारका नोट प्रचलनमा बन्देज लगाउनु भन्दा पहिले सटही सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
छलफलमा विगतको भारु नोट प्रचलनमा भएको बन्देज र भारु नोट प्रयोगका क्रममा उत्पन्न समस्यालाई दुवै देशको सहमतिमा समाधान गरिने आस्वासन भारतीय वित्तमन्त्री सितामरणले दिइन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पछिल्लो आर्थिक स्थिति, लगानीको वातावरण तथा राजस्वका क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयास, द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य सन्धिलगायत विषयमा समेत दुई अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाई हिस्सा भारतसँग भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बढ्दो व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न भारत सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेl